सेनिटाइजर कसरी बनाउने ? - लण्डन काठमाडौँ
सेनिटाइजर कसरी बनाउने ?
घरमा उत्पादन गरिएको मदिरालाई कुनै भाडामा उमाल्दा निस्किएको बाफलाई चिसो बनाएर संकलनभएको पानी नै मूलतः इथानोल भएको डा. स्याउलाको भनाइ छ ।
सोही इथानोल अल्कोहलमा ग्लिसिरिन, डिस्टिलवाटर, हाड्रोजन पेरोअक्साइडको सम्मिश्रण गरेर सेनिटाइजर बनाउन सकिन्छ । ‘कुन तरल पदार्थ कति मात्रामा सम्मिश्रण गरेर सेनिटाइजर बनाउने भन्ने कुरा तालिमप्राप्त व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्छन्,’ डाक्टर स्याउला भन्छन्, ‘अन्दाजको भरमा मदिराबाट सेनिटाइजर बनाउन सकिँदैन ।’ नाष्टका प्रवक्ता डा.सुरेश ढुंगलेका अनुसार इथानोल अल्कोहल ८० प्रतिशत, ग्लिसिरिन १.४ प्रतिशत, डिस्टिलवाटर १८.८४ प्रतिशत र हाइड्रोजन पेरोअक्साइड ०.१२ लाई राम्ररी घोलेपछि घरेलु सेनिटाइजर तयार हुन्छ ।
बजारमा पाइने शुद्धीकरण गरिएको इथानोल अल्कोहल अर्थात् स्प्रिटबाट पनि सेनिटाइजर बनाउन सकिन्छ । बजारमा सामान्य व्यक्तिले इथानोल अल्कोहल किनेर माथि उल्लिखत ३ तरल कुराहरु मिश्रण गरेर सेनिजाइजर बनाउन सकिने वैज्ञानिक डाक्टर स्याउला बताउँछन् । बजारमा इथानोल अल्कोहल उपलब्ध नभएको खण्डमा घरेलु मदिराबाट इथाइन निकालेर सेनिटाइजर बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
अहिले ललितपुर महानगरपालिकाका प्रत्येक वडाका दुई जनालाई सेनिटाइजर बनाउने तालिम दिइएको छ । महानगरपालिकामा २९ वटा वडा छ भने ५८ जनालाई सेनिटाइजर बनाउन ६ दिने तालिम दिइरहेको ललितपुर महानगरपालिकाका सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष दिनेश कार्कीले बताए ।